Alibaba ကော်တီဟာ ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ရင်းနှီးပြီး အလိုအလျောက် မောင်းနှင်တာတွေကို Deeproute. ai - Pandaily
Categories: Auto ကိုPandaily စက်တင်ဘာ 14, 2021 စက်တင်ဘာ 15, 2021 မှာ Posted
တရုတ်ကုမ္ပဏီ L4 မှ အလိုအလျောက်မောင်းနှင် သည့် Deeproute. ai ကုမ္ပဏီကို အင်္ဂါနေ့တွင် ကြေငြာလိုက်သည်B နှစ်ဘီးတပ် ဘဏ္ဍာငွေ သိန်း ၃၀၀ ပြီးစီးပြီAlibaba က ဦးဆောင်ကာ ဘီဘီ၊ RZ Capital ၊ Cloud Rev ၊ Partnership နှင့် Glory Gen မဲ စသည်တို့အပြင် Jeneration Capital ၏ ရှယ်ယာရှင်ဟောင်းများ၊ Capital Industry ၏ ရန်ပုံငွေများနှင့် Glucky ၏ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီများလည်း လိုက်ပါလာကြသည်။
Automotive Engineering Association (SAE) က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့် ၆ ကနေ ရ၅ အတွင်း အလိုအလျောက် မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ အဆင့်အထိ ပါ၀င်ပါတယ်။ ၄င်း ယာဉ်တွေကို လူအချင်းချင်း မဆက်ဆံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တရုတ်မီဒီယာများ တင်ပို့မည်ေနာက္က်မွDeeprout.ai ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ခန့်၊ ပြတ်ရွေ့တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် သန်း ၁၀ဝ ကျော်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
Deeprout.ai ၏ CEO Light of the Week Programme က “Wale Finance of the Walk of the Walk of the Walk of the Walk of the Walk of the Walk of the Walk of the Walk of the Wales of the Carrier of the Year of the Carrier of the Carrier of Destrier of the Spech of the Carrier of the Carriage of the Carriage of Fach. and and of Autominters. and Operson. and Operation of the Carrier of Fach of the Carrier of the
Deeproute. ai မွာလည္း ေနာက္ထပ္ သံုးႏွစ္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ကုမ္ပဏီဟာ အလိုအလျောက်မောင်းနှင်မှုစနစ်ကို အဓိကထားတည်ဆောက်ပြီး မြို့တွင်းမောင်းနှင်မှုနဲ့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အဓိကကျတဲ့ အင်အားနှစ်မျိုးနဲ့ အလိုအလျောက် မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ Scene တွေကို စမ်းသပ်မှုစတင်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စ၍ Deeprout.ai သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း Dong Motor, Cao Travel and Trip, Xiamen Ocean Gate Trip Limited စသည်တို့နှင့် သဘောတူညီချက်အရ Shenzhen, Wuhan, Hangzhou, Xiamen နှင့် Xiamen Gate စသည့် နေရာများတွင် အလိုအလျောက် မောင်းနှင်စမ်းသပ်လည်ပတ်နေပြီး သရုပ်ပြနေသည်။
ဇူလိုင် ၁၉-ရှန်ကျန်းမြို့ ဖူကူအိုကာခရိုင်က Deeprout.ai နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တရားဝင်အများပြည်သူကို Robotaxi ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ Rosbotaxi ခရိုင်ရဲ့ မီတာ ၂၀ အကွာအဝေးမှာ တိကျစွာဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး လူသားတွေအပါအဝင် အရာဝတ္ထုမျိုးစုံနဲ့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ သွားလာနိုင်တဲ့ လမ်းတွေပေါ်မူတည်နေပါတယ်။
Automatic Drive ကုမၸဏီ WeRide သည္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ေမလအထိ ဘ႑ာေငြ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး စုစုေပါင္း တန္ဖိုးအားျဖင့္ ၃၃ သန္းအထိ ရွိလာသည္။ ဧၿပီ၊အေမရိကန္တြင္ TuSimple စာရင္းဝင္. နှစ်ဖက်စလုံးဟာ Deeprout.ai ရဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေပါ။
Topics: မြင်ကွင်းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္လာတာေတြကို WebRide က ၅ လအတြင္း သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
BYD, FAW သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၇ သန်းနှင့် ဖက်စပ် လုပ်ကိုင် သည်
China Enterprise Data Platform ၏ သတ္တမ မြောက် စစ်တမ်း အရ FAW Fudi New Energy Technology Co., Ltd. ကို မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အရင်းအနှီး ယွမ် ၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၇ သန်း) ဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Westwell သည်ကမ္ဘာ့ ပထမ ဦး ဆုံး စမတ် ဘက်ထရီ လဲလှယ် မောင်း သူမဲ့ စီးပွားဖြစ် ယာဉ် Q-Truck ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့သည်
Xiwei သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ရွန္ ဟိုင္း ၿမိဳ႕တြင္ မီဒီယာ မိတ္ဆက္ ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ ပထမဆံုး စမတ္ ဘက္ထရီ လဲလွယ္ ေမာင္း သူမဲ့ လုပ္ငန္း သံုး ယာဥ္ Q-Truck ကို အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ကုမ္ပဏီ NIO ၏ နိုင်ငံရပ်ခြား လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ လျှပ်စစ် ကားများ ကိုစတင် ရောင်းချ နိုင်သည်။
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ကုမ္ပဏီ NIO ၏ အမေရိကန် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီသည် မကြာသေးမီက ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ ဆန် ဂျိုး စ် ရှိ ရုံး အဆောက်အအုံ ကို ၁၀ နှစ် ငှားရမ်း ရန် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ဌာနချုပ် ၏ area ရိယာ ကို ၁၈၅ ၈၀ စတုရန်းမီတာ အထိ နှစ်ဆ တိုးခဲ့သည်။